ကွညျ့မွငျတိုငျ ကွှလှေငျ့ ကွယျပှငျ့လေးမြားအားရညျစူးပီး ကိုယျတိုငျ ဆှမျးခကျြလှူ ကုသိုလျယူခဲ့တယျဆိုတဲ့ နရှေသှေေးအောငျရဲ့ ဖခငျကွီး – Shwe Likes
ယမနျနကေ့ ငွိမျးခြ မျးစှာ ဆန်ဒဖျောထု တျနစေဉျ လူမဆနျ စှာ ကားဖွငျ့တိုကျ သနေတျဖွငျ့ ပဈခတျခံရပွီး ကဆြုံးသှား သော လူငယျမြား အတှကျရ ညျစူး၍ ယနကေို့ ယျတိုငျခကျြ ကာ ရနျကွီးေ အာငျေ ကြာငျးတိုကျသို့ နဆှေ့မျးကပျခဲ့ပါ သညျ
လာရောကျ ကူညီသူနှငျ့ ဟငျးလှူသူမိတျဆှမြေားအား လညျး ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါသညျ… . လူမဆနျစှာ ကြူးလှနျသူ၊ စခေိုငျးသူ၊ အထကျမှ တာဝနျ ရှိသူ မြားတှငျလညျး ဤအရှယျသားငယျသမီးငယျ ညီငယျ ညီမငယျ မြားရှိကွပါလိမျ့မညျ…
ယခုလူငယျမြား၏ ကွိုး ပမျး အားထုတျမှုမှာ သုတို့၏ အနာဂတျအတှကျ ဖွဈသလို သငျတို့၏ ကလေးမြား အနာဂတျ အတှကျလညျးဖွဈသညျ ကိုယျခငျြးစာတရားရှိစခေငျြသညျ. ဝဋျလညျတတျပါသညျ
မိမိတို့၏ အနာဂတျနှငျ့ တိုငျးပွညျ၏ ထှနျးလငျးေ တာကျပ လာမညျ့ အနာဂတျ အတှကျ ဆန်ဒ ထုတျဖျောရငျး အသကျစှနျ့ သှားသူမြား ကောငျးရာဘုံ သို့ ရောကျ ရှိနိုငျပါစေ.. အဖိနှိပျခံကငျး၍ လှတျလပျတရား မြှတ ပွီး လူသားတိုငျး တနျးတူညီမြှ ရှိစမေညျ့ ဖကျဒရယျ ပွညျထောငျစုကွီး ဖွဈတညျ မှုကို မွငျ့မွတျသောဘုံမှနေ၍ ရှုမွငျနိုငျပါစေ…Source;Dr. Nay Soe Maung
ယမန်နေ့က ငြိမ်းချ မ်းစွာ ဆန္ဒဖော်ထု တ်နေစဉ် လူမဆန် စွာ ကားဖြင့်တိုက် သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရပြီး ကျဆုံးသွား သော လူငယ်များ အတွက်ရ ည်စူး၍ ယနေ့ကို ယ်တိုင်ချက် ကာ ရန်ကြီးေ အာင်ေ ကျာင်းတိုက်သို့ နေ့ဆွမ်းကပ်ခဲ့ပါ သည်
လာရောက် ကူညီသူနှင့် ဟင်းလှူသူမိတ်ဆွေများအား လည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်… . လူမဆန်စွာ ကျူးလွန်သူ၊ စေခိုင်းသူ၊ အထက်မှ တာဝန် ရှိသူ များတွင်လည်း ဤအရွယ်သားငယ်သမီးငယ် ညီငယ် ညီမငယ် များရှိကြပါလိမ့်မည်…
ယခုလူငယ်များ၏ ကြိုး ပမ်း အားထုတ်မှုမှာ သုတို့၏ အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်သလို သင်တို့၏ ကလေးများ အနာဂတ် အတွက်လည်းဖြစ်သည် ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိစေချင်သည်. ဝဋ်လည်တတ်ပါသည်
မိမိတို့၏ အနာဂတ်နှင့် တိုင်းပြည်၏ ထွန်းလင်းေ တာက်ပ လာမည့် အနာဂတ် အတွက် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရင်း အသက်စွန့် သွားသူများ ကောင်းရာဘုံ သို့ ရောက် ရှိနိုင်ပါစေ.. အဖိနှိပ်ခံကင်း၍ လွတ်လပ်တရား မျှတ ပြီး လူသားတိုင်း တန်းတူညီမျှ ရှိစေမည့် ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကြီး ဖြစ်တည် မှုကို မြင့်မြတ်သောဘုံမှနေ၍ ရှုမြင်နိုင်ပါစေ…Source;Dr. Nay Soe Maung